Shuruudaha iyo Shuruudaha - Bulshada Cadaalada
Fadlan si taxadar leh u akhri shuruudahaan iyo xaaladdooda si ay u maamulaan isticmaalkaaga boggan. Isticmaalkaaga boggaan wuxuu ka dhigan yahay aqbalida Shuruudaha iyo Shuruudaha, kuwaas oo ka bilaabanaya taariikhda booqashada ugu horeysa ee goobta. Haddii Shuruudaha iyo Shuruudahaan aan la aqbalin buuxda, fadlan jooji isticmaalka meeshan si deg deg ah. Waxaad ogolaatay inaad isticmaasho goobtan oo kaliya ujeedo sharci ah, iyo qaab aan jebinaynin xuquuqda qof kasta oo saddexaad ah, ama xannibo ama la joojiyo isticmaalka iyo ku raaxaysiga meeshan.
Boggaan iyo macluumaadkiisa waxaa lagu bixiyaa 'sida' 'iyadoo aan la bixin wax damaanad ah nooc kasta ha ahaato, ama muujin. Isticmaalka boggan iyo macluumaadka ku yaala waa gebi ahaan khatarta isticmaale ahaaneed. Munaasabaddan ma dhici doonto Element Society inay mas'uul ka tahay wixii waxyeello ah ee ka soo baxa ama la xidhiidha boggan. Qalabyadaada kelida ah iyo kuwa kali ah ee ku qanacsan ee ku qanacsanaanta boggan iyo / ama macluumaadka ku jira is in la joojiyo isticmaalka goobta iyo macluumaadka.
Element Society ma oggola in hawlaha ku jira boggani uu noqon doono mid aan kala go 'lahayn ama qalad la'aan, ama cilladahaasi waa la saxayaa.
Ilaalinta feyradda, jebinta iyo dembiyada kale
Waxaan isku dayeynaa inaanu hubino oo tijaabino walxaha dhammaan heerarka wax soo saarka, si kastaba ha ahaatee waa inaad qaadatid taxaddarradaada si aad u hubisid in habka aad u shaqaaleysiisid helitaanka boggaani uusan kuu soo bandhigin khatarta fayraska, lambarka kombiyuutarka ee xun ama noocyada kale ee faragelinta kuwaas oo dhaawici kara nidaamka kombiyuutarkaaga.
Ma aqbali karno wixii mas'uuliyad ah ee lumitaanka, khalkhalka ama waxyeellada macluumaadkaaga ama nidaamka kombiyuutarka kuwaas oo dhici kara inta la isticmaalayo maaddooyinka laga soo qaato boggan. Waa inaadan si khalad ah u isticmaalin boggayaga si aan ku ogaanno soo saarista fayruusyada, trojans, gooryaanka, qalab kale oo xaasidnimo ama tikniko waxyeello leh. Waa inaadan isku dayin inaad hesho galmo aan la fasaxnayn ee boggayaga, server-yada nooca loo kaydiyo ama server kasta, kombiyuutar ama xog-dhowr ah oo ku xiran boggayaga. Waa inaadan weerarin goobta aan adeegsaneyno diidmada adeegga diidmada ama weerarka adeegga diidmada ah.
By jebinta xeerkan, waxaad geli lahayd fal dambi ah hoosta Xeerka Xadgudub Kumbuyuutar 1990. Waxaan u soo sheegi doonnaa wixii jebin noocan oo kale ah hay'adaha sharci fulinta ee la xidhiidha, waxaanan la shaqeyn doonaa saraakiishan iyaga oo kaashanaya aqoonsigaaga.
Macluumaadka adiga kugu saabsan
Marnaba ma dhaafno faahfaahinta aad na siiso qof aan ahayn kuwa lagu cayimay siyaasadeena asturnaanta.
Inkastoo dhammaan dadaal macquul ah la sameeyey si loo xaqiijiyo saxsanaanta content, wax masuuliyad ah looma qaadi karo wixii qalad ah ama ka tag.
Inkastoo aan sameyno dadaal kasta oo aan ku hayno shabakadda internetka ee Element Society, haddana ma bixin karno dammaanad, shuruudo ama damaanad ah sida saxda ah ee macluumaadka goobta. Ma aqbalno masuuliyadda khasaare ama waxyeelo soo gaartay dadka isticmaala bogga internetka, haddii ay toos u yihiin, aan toos ahayn ama natiijo ahaan, haddii ay sababtay jariidada, jebinta heshiiska ama haddii kale.
Tani waxaa ka mid ah luminta: dakhliga ama dakhliga, ganacsiga, faa'iidooyinka ama qandaraasyada, keydinta la filayo, xogta, amniga, hantida la taaban karo ama maamulka qashin-qaadka ama waqtiga xafiis ee la xidhiidha boggayaga ama iyada oo la xiriirta isticmaalka, awood la'aanta isticmaalka, ama natiijooyinka isticmaalka boggayaga, boggaga internetka ee la xidhiidha iyo walxaha ay ku qoran yihiin. Xaaladdan kama hor istaagi karto sheegashada khasaaraha ama waxyeellada hantidaada la taaban karo ama sheegashooyinka kale ee luminta khasaaraha tooska ah ee aan laga saarin mid ka mid ah qaybaha kor ku xusan.
Tani ma saamaynayso masuuliyadeena dhimashada ama dhaawaca shakhsi ahaaneed ee ka imaanaya dayacaadeena, ama masuuliyadeena been-abuurka been-abuurka ah ama been-u-sheegashada sida arrin aasaasi ah, ama mas'uuliyad kale oo aan laga saari karin ama ku xadidanayn sharciga sharci ahaan.
Waxaan soo dhaweyneynaa oo ku dhiirigelinaynaa boggaga internetka in ay isku xiraan macluumaadka ku yaal boggaan, mana aha inaad weydiisato rukhsad aad ku xiran tahay adigoon eegin
Si kastaba ha ahaatee, kuma siin karno fasax inaad soo jeedisid in website-kaagu la xiriiro, ama uu taageeray ururka Element Society.
Element Society ma aqbalaan wax mas'uuliyad ah ka badan qaybta sadexaad ee xisbiyada. Jiritaanka isku xirnaantaas ma ahan mid ka soo horjeeda bogagga internetka, ama fikradaha lagu soo bandhigay. Isku-xirashada boggaan waa mid aad u khatar ah.
Element Society waxay dib u eegi kartaa shuruudaha iyo shuruudaha wakhti kasta, aadna ogolaatay inay si joogto ah dib u eegaan. Haddii dib-u-eegistu ay noqoto mid aan la aqbali karin, waxaad ogolaatay inaad joojiso helitaanka isla markiiba.
Xuquuqda daabacaada, xuquuqda ganacsiga iyo xuquuqda lahaanshaha
Qayb ka mid ah boggan, oo ay ku jiraan macluumaadka, sawirada, logos, sawirrada, muuqaalka guud ee goobta, waa la nuquli karaa, la daabici karaa, la daabici karaa ama dib loo daabici karaa qaab kasta oo kasta iyada oo aan haysan ogolaansho qoraal ah oo horay loo haysto ee haysta xuquuqda daabacan marka laga reebo shakhsi ahaan shakhsi ahaan, ama isticmaalka aan ganacsiga ahayn.
Shuruudaha iyo Shuruudahaas waxaa dejin doona sharciyada England iyo Wales. Maxkamadaha ku yaalla England iyo Wales waxay yeelan doonaan awood sharci oo ku saabsan muran kasta oo laga yaabo inay soo baxaan.
Haddii mid ka mid ah shuruudahaan iyo shuruudahaan la go'aaminaayo inay sharci darro yihiin, mid aan shaqeynin ama aan la awoodi karin sababo dowlad-goboleed ama waddan oo shuruudahaan loogu talagalay inay noqdaan kuwo taabogal ah, ka dibna ilaa iyo inta ay ku eg tahay muddada sharci ahaan, sharci-darro ama aan la fulin , waa in la jebiyaa oo laga tirtiraa shuruudahaan iyo shuruudaha soo hadhay waa ay noolaan doonaan, waxay ku jiri doonaan xoog buuxda iyo saameyn waxayna sii wadaan inay noqdaan kuwo waxqabanaya oo la fulin karo.